Ny fampidirana an'i Zeevou amin'ny Google Contacts amin'ny alàlan'ny Zapier
Integrations » Fifandraisana Google
Google Contacts & Zeevou Integration
Ampifandraiso amin'ny Google Contacts ny Zeevou's Profiles amin'ny alàlan'ny Zapier. Noho izany, rehefa mamandrika ny fanananao ny vahiny, dia halefa any amin'ny Google Contacts anao ny antsipirian'ny fifandraisany. Midika izany fa isaky ny mahazo antso an-tariby na hafatra an-tsoratra amin'ny vahiny ianao dia azonao atao ny miteny, ohatra, "Salama, John", ary manaraha ny fanontanian'ireo vahininao amin'ny sehatra manokana kokoa. Mandritra ny syncing an'i Zeevou sy Google Contacts amin'ny alàlan'ny Zapier, isaky ny tonga ny famandrihana dia ho tonga ho azy ny fifandraisana vaovao. Avy eo ianao dia afaka misafidy izay antsipirian'ny fampahalalana mifandraika amin'ny vahininao izay tianao ampiana ao amin'ny Google Contacts, ohatra, ny adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, sns.
Manampy fikitika manokana ny seraserao
Manamboara lisitry ny antsipirian'ny fifandraisana lehibe amin'ny vahininao
Mahalalà ny vahininao ary mahazoa famandrihana mivantana bebe kokoa
misoratra anarana amin'ny Google Contacts